समाचार - मुख्य विचार
तपाइँको पहिलो विचारहरु मध्ये एक सुरक्षा हुनेछ। के तपाइँ घर मा उपकरणहरु को लागी सुरक्षित छ? तिम्रो स्वास्थ्य कस्तो छ? तपाइँका बच्चाहरु छन्? यदि तपाइँ स्वास्थ्य समस्याहरु को लागी हुन्छ, तपाइँको डाक्टर संग जाँच गर्नुहोस् र सुनिश्चित गर्नुहोस् कि एक नयाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू गर्ने तपाइँको लागी सुरक्षित छ। केहि उपकरणहरु पर्याप्त छन्; विचार गर्नुहोस् यदि तपाइँ यसलाई नियमित रूप मा सार्न आवश्यक छ, यो तपाइँको शरीर मा तनावपूर्ण हुन सक्छ। यदि सम्भव छ भने, यो (वा यस्तै उपकरणहरु) पहिले किन्नु भन्दा पहिले बाहिर प्रयास गर्नुहोस्। यो गर्नु अघि एक व्यक्तिगत प्रशिक्षक को राय सोध्न लायक हुन सक्छ।
हल्लाहरु बाट सावधान रहनुहोस्
मानिसहरु फिटनेस उपकरण मा के भन्छन् को बारे मा सावधान रहनुहोस्, सबै कुरा ठीक छैन। केहि मानिसहरु उपकरण को एक टुक्रा संग एक नराम्रो अनुभव छ र सम्पूर्ण ब्रान्ड टाढा। केहि मानिसहरु आफ्नो राय मात्र उनीहरु के सुनेको मा आधारित बनाउँछन्। सबै भन्दा राम्रो समाधान तपाइँको अनुसन्धान गर्न को लागी हो र यदि संदेह मा, खरीद गर्नु अघि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
अन्तरिक्ष विचार गर्नुहोस्?
निस्सन्देह, तपाइँ ठाउँ मा तपाइँ घर मा उपलब्ध छ विचार गर्न आवश्यक छ। केहि खरीददारहरु यो महत्वपूर्ण विचार बिर्सन्छन्। किन्नु अघि उपकरण कहाँ राख्नु पर्छ विचार गर्नुहोस्। तपाइँको घर उपकरण समायोजित गर्न सक्षम नहुन सक्छ। योजना बनाउँछ र सुनिश्चित गर्नुहोस् कि मेशिन आराम संग फिट छ तपाइँ संग छ। यदि संदेह मा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, र हामी उपकरण को कुनै विशेष टुक्रा को लागी आवश्यक ठाउँ मा सल्लाह दिन सक्छौं।
तपाइँको बजेट के हो?
सधैं विचार गर्नुहोस् कि तपाइँसँग कति पैसा छ र तपाइँ उपकरण को लागी तिर्न इच्छुक हुनुहुन्छ। हामी सामान्यतया सबै भन्दा राम्रो उपकरण मा लगानी गर्न को लागी तपाइँ बर्दाश्त गर्न को लागी सिफारिश गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ खरीद को लागी अधिक प्रतिबद्ध हुनुहुनेछ र उपकरण को अधिक रमाईलो हुनेछ। केहि सस्तो किन्न को लागी यो एक जोखिम को कम को सिफारिश गर्दछ, तर अक्सर जब तपाइँ सस्तोमा किन्नुहुन्छ तपाइँ एक गरीब अनुभव हुनेछ र खरीद पछुताउनुहुनेछ।
के तपाइँलाई यो चाहिन्छ?
यो एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो। उपकरण आवश्यक छ? के यो तपाइँको फिटनेस लक्ष्यहरु, गतिविधिहरु तपाइँ गर्न चाहानुहुन्छ, शरीर को भाग तपाइँ मा ध्यान केन्द्रित गरीरहनु भएको छ वा कुनै सिफारिशहरु दिईएको छ? व्यायाम चुनौतीपूर्ण तर रमाईलो हुनुपर्छ। सबै भन्दा राम्रो फिटनेस उपकरण मात्र काम गर्दछ यदि तपाइँ यसलाई नियमित रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ! हाम्रो फिटनेस उपकरण को एक धेरै धेरै बहुमुखी छ, तेसैले तपाइँ विशेष प्रकार्य को धेरै वस्तुहरु को खरीद को सट्टा अधिक सुविधाहरु संग केहि किनेर पैसा बचाउन सक्षम हुन सक्नुहुन्छ।
तपाइँ किन्नु भन्दा पहिले प्रयास गर्नुहोस्
कुनै पनि उपकरण मा लगानी गर्नु भन्दा पहिले, एक जिम मा जानुहोस् र उपकरण को एकै टुक्रा को कोशिश गरीरहेको छ कि यदि तपाइँ यसलाई प्रयोग गरेर रमाईलो गर्न को लागी विचार गर्नुहोस्। यो जरूरी योर्क फिटनेस उपकरण हुन छैन, यो अझै पनी तपाइँ आन्दोलन र उपयोग को एक विचार दिनेछौं। धेरै जिम एक सानो शुल्क को लागी सत्र मा ड्रप प्रदान गर्दछ, तपाइँ एक सत्र मा फिटनेस उपकरण को बिभिन्न टुक्राहरु संग प्रयोग गर्न को लागी अनुमति दिन्छ।
ग्राहक सेवा कल गर्न विचार गर्नुहोस्।
यदि तपाइँसँग कुनै शंका वा प्रश्नहरु छन् भने हाम्रो ग्राहक सेवा कल गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। योर्क फिटनेस टीम हाम्रो उपकरणहरु को सबै मा जानकार छ र तपाइँ कसरी पैसा बचाउन र तपाइँको घर जिम को सबै भन्दा बाहिर प्राप्त गर्न को लागी केहि राम्रो विचार दिन सक्छ। हाम्रो लक्ष्य तपाइँ सबै भन्दा राम्रो अनुभव सम्भव छ जब तपाइँ हामी बाट फिटनेस उपकरण खरीद गर्नुहुन्छ।